I-Sendoso: Khuthaza Ukuzibandakanya, Ukutholwa, Nokugcinwa Nge-Direct Mail | Martech Zone
Lapho ngisebenza epulatifomu enkulu ye-SaaS, enye indlela ephumelelayo esasiyisebenzisela ukuhambisa uhambo lwamakhasimende phambili kwakuwukuthumela isipho esiyingqayizivele nesibalulekile kumakhasimende ethu esihlosiwe. Ngenkathi izindleko zomsebenzi ngamunye zazibiza kakhulu, utshalomali lwalunembuyiselo engakholeki kutshalomali.
Ngokuhamba phansi kwebhizinisi nemicimbi ikhanseliwe, abathengisi banezinketho ezithile ezinqunyelwe zokufinyelela amathemba abo. Ukungasho neze ukuthi izinkampani zishayela umsindo omkhulu ngeziteshi zedijithali. Imeyili eqondile iyakwazi ukukhuphuka ngaphezu komsindo, ikhuphuke iye phezulu 30x isilinganiso sokuphendula se-imeyili.
Uma ukwazi ukubandakanya izithameli zakho ngezinhloso ezinhle, ezibonakalayo, nezinomthelela, ungahambisa uhambo phambili. USendoso ungumhlinzeki walezi zinsizakalo - kusuka ekukhethweni komkhiqizo, kuya kokuzenzakalelayo, ukuhlanganiswa kokuthengiselana, ngokugcwaliseka. Lelisu laziwa njenge i-imeyili ezenzakalelayo yokumaketha okuzenzakalelayo.
Imiphumela iyamangalisa, amaklayenti akwaSendoso azuze:
Ukunyuka okungu-22% kwemali ngayinye
Ukwanda ngama-35% ekuguqulweni kwemihlangano
Izinga lokuphendula elingu-60% kusuka kumaphakeji athunyelwe
Ukubuyiselwa okungu-450% kumali etholwe ngamadili kuvaliwe
Ukwanda ngama-500% ngamanani asondele
Isebenzisa ukuqinisekiswa kwekheli, i-Sendoso ingathumela amathemba akho noma amakhasimende wakho umkhiqizo owenzelwe wena, i-egift, okonakalayo, noma yimuphi umkhiqizo ovele e-Amazon. Ipulatifomu ibuye ihlanganiswe nezinkundla ezinkulu zokuzenzakalela zokumaketha, amapulatifomu wokubandakanya abathengisi, ama-CRM, amapulatifomu wokubandakanya amakhasimende nezinkundla ze-ecommerce.
Lungiselela Uhambo Lomthengi Wakho
Ukuqwashisa - thumela amakhadi we-3D pop-up, izincwadi zokubhala ezinophawu, amasaka ama-tote, amashaja aphathekayo, noma ezinye izinto ze-swag ezincane ukungena kwi-radar yabantu.
Isinqumo - hlanganyela ngempumelelo nama-akhawunti wakho aqondiwe ngokuthumela ama-mailing dimensional noma amajackethi wekhwalithi ephezulu afaka i-logo yakho.
Ukucabangela - Thuthukisa intshisekelo nenhloso phakathi kwezithameli zakho ngama-mailer ama-video noma ukuphatha okumnandi okune-logo yakho.
Shesha Ukuthengiswa Kwakho
Ezinye izibonelo zemikhiqizo ongakwazi ukuyisebenzisela ukuthumela:
Kuvulwa Izicabha - Ngena edeskini lothile esikhundleni sokulwa ebhokisini labo lokungenayo ngento eyenziwe ngezifiso evela e-Amazon enombhalo obhalwe ngesandla ocabangayo.
Ama-Dece Accelerators - Qinisa ubudlelwano bese uqedela izingxoxo zokuxoxisana nebhodlela lewayini elenziwe ngokwezifiso zenkampani yakho.
Abenzi Bemihlangano - Bandakanya abenzi bezinqumo abaningi ngasikhathi sinye ngokuthumela amakhekhe, amakhukhi, noma okunye ukuphatha okumnandi ihhovisi lonke elingabelana ngakho.
Usebenzisa i-Sendoso, inkampani yesoftware ukuzibandakanya okungaxhunyiwe ku-inthanethi,ukwazile ukwakha u- $ 100M kwipayipi kanye ne- $ 30M kumali engenayo kusuka emkhankasweni owodwa. Bathumele izinyanda ezingama-345 kuma-akhawunti e-ABM, kufaka phakathi ikhadi lesipho, okumnandi, i-Total Economic Impact infographic, isifinyezo seTotal Economic Impact, nenothi elibhalwe ngesandla.
Ukuhlanganiswa okukhiqizwayo kufaka phakathi i-Salesforce, i-Salesforce Marketing Cloud, i-Salesforce Pardot, i-Eloqua, I-Hubspot, Outreach, Salesloft, SurveyMonkey, Influitive, Shopify neMagento.
Uma unentshisekelo yokufunda kabanzi ngokuthi i-1: 1 ukumaketha okwenziwe ngezifiso kungakudala kanjani ukuqwashisa ngomkhiqizo futhi yakhe iphayiphi yakho ye-post-COVID, cela idemo ye-Sendoso.
Cela i-Sendoso Demo
Tags: eloquaindawoOkunomthelelaMagentoukufinyelelasalesforcei-salesforce pardotIfu le-Marketingfore MarketingUkuthengiswaLoftthengaSurveyMonkey